Ubungako obujwayelekile bophahla lwamapulangwe bunjani? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ubungako obujwayelekile bophahla lwamapulangwe bunjani?
1.Izimpawu zokhuni oluqinile lwe-UV spray paint
Lolu hlobo lwaphansi lwenziwe ngokhuni oluqinile ngemuva kokuba lufakelwe imishini, kanti ingaphezulu lakhona selaphiliswa yi-lacquering. Izinto zokwakha ezijwayelekile yilezi: i-alder, i-oki, umlotha, imapule kanye ne-cherry, njll. Kukhona futhi nezitezi ezifihliwe zezinhlobo ezingandile neziyigugu njenge-rosewood ne-rosewood.
Lesi sisekelo sinemininingwane eminingi, ngokuvamile: 450 mm x 60 mm x 16 mm, 750 mm x 60 mm x 16 mm, 750 mm x 90 mm x 16 mm, 900 mm x 90 mm x 16 mm, njalonjalo.
Upende we-UV obohliwe ngokhuni oluqinile lwangaphansi lungahlukaniswa ngohlobo olukhanyayo nohlobo lwe-matt. Ngemuva kokulashwa kwe-matt, ingaphezulu lesitezi ngeke lilimaze amehlo ngenxa yokukhanya okukhanyayo, futhi ngeke liwele ngenxa yesitezi esibushelelezi ngokweqile. Futhi kuhle kakhulu, kusetshenziswa kakhulu ekuhlobiseni kwasekhaya.
Lolu hlobo lwaphansi lwenziwe ngokhuni olumsulwa ngokufudumala okufudumele nokuzizwa okuhle konyawo, okungokoqobo futhi kungokwemvelo. Ukuhlanganiswa okungaphezulu bushelelezi futhi kuyunifomu, kunosayizi abaningi, ukukhetha kukhulu, futhi ukugcinwa kulula. Kodwa-ke, ngenxa yokhuni olubonakalayo, phansi okunjalo kuvame ukuguquguquka futhi kubuye kubuye kubuye kube ngumswakama ezindaweni ezomile noma ezinomswakama, futhi okunzima ukuzifaka.
Ukuchazwa kwesitezi esiqinile sokhuni
Indawo ebizwa ngokuthi yi-solid solid composite floor yakhiwa izingqimba eziningana noma eziningi zama-pine veneers aqhekekile futhi aphathwe ngezinambuzane kanye nokuthamba njengezinto eziyisisekelo, kanti kufakwa ungqimba olulodwa lwezinkuni olunobukhulu olusukela ku-1 kuye ku-5 mm njengoba ungqimba olungaphezulu. Ukusebenza kwenhlanganisela yeLacquer, kufakwa ngokulinganayo i-lacquer engqimbeni engaphezulu kanye naphansi yamapulangwe e-tenon.
Ukucaciswa kwalesi sisekelo ngokuvamile: 1802 mm x 303 mm x 15 mm (12 mm), 1802 mm x 150 mm x 15 mm, 1200 mm x 150 mm x 15 mm, no-800 mm x 20 mm x 15 mm.
Ngoba lesi sisekelo sisebenzisa isakhiwo se- "plywood", ixazulula kancane inkinga yokushoda kwezinkuni okubangelwa umswakama okuqukethwe yizinkuni. Ngaphezu kwalokho, kulula ukupaka, inomuzwa omuhle wonyawo, inokumelana okuhle ne-abrasion, futhi kulula ukuyigcina. Kodwa-ke, izinto ezibonakalayo zezinhlobo ezithile kulesi sisekelo zithambile, ngakho-ke kulula ukukhiqiza ukucasulwa noma ukubekeka.
3.Izincazelo zokubeka phansi phansi kwamadamu
Lolu hlobo lwaphansi luyimikhiqizo engeniswa kakhulu ezweni. Kuyisakhiwo esigqediwe senziwe nge-substrate ephakathi nendawo nephezulu ye-fiberboard substrate ne-alumina coating surface layer. Ukucaciswa kwalolu hlobo phansi kufana kakhulu, ngokuvamile okuyi-1200 mm x 90 mm x 8 mm, futhi kukhona imikhiqizo enobukhulu obungu-7 mm.
Lolu hlobo lwaphansi lunezinhlobonhlobo ezisetshenziswayo, izinhlobo eziningi zemibala, futhi lunezinzuzo zokuthungwa kanzima, akukho deformation, ukumelana nomlilo, ukumelana nokugqoka, ukulungiswa okulula, ukwakhiwa okulula nokunye. Kodwa-ke, lokhu kuqukethwe futhi kunobungozi, okungukuthi, ukuthungwa kubanda futhi kuba nzima.
Ubungako obujwayelekile bophahla lwamapulangwe bunjani? Okuqukethwe okuhlobene